Budata Geekbench 4 maka Windows
Budata Geekbench 4
Free Budata maka Windows (88.00 MB)
Budata Geekbench 4,
Geekbench 4 bụ mmemme nnwale processor na-ewu ewu nke na-egosi etu ngwaike kọmpụta mkpanaka gị na desktọpụ siri dị ike.
Na ụdị nke 4 nke mmemme ule Geekbench, nke a na-eji ọ bụghị naanị anyị dị ka ndị ọrụ njedebe, kamakwa site na ụdị ewu ewu dị ka AMD, Microsoft, Samsung, LG, HP, a na-eji ya tụọ arụmọrụ processor na ekwentị gam akporo, iOS. na mbadamba, yana kọmputa nwere Windows, MAC na ọbụna Linux sistem. Nezie, agbakwunyere ule ọhụrụ.
Budata DNS Benchmark
DNS Benchmark bụ ngwa efu emebere iji nyere gị aka ịnwale arụmọrụ nke sava ngalaba aha nke ndị na-ahụ maka ịntanetị gị na-eji. Nozuzu, ọ dị ezigbo mkpa ịgbanwe ngalaba aha na...
Budata SSD Benchmark
SSD Benchmark bụ sọftụwia efu emepụtara iji nwalee arụmọrụ nke diski steeti siri ike. Usoro ihe omume ahụ gụnyere nyocha sịntetik isii na nnwale mmegharị...
Budata MySQL Workbench
Ọ bụ ngwaọrụ nlegharị anya nchekwa data nke gụnyere nchekwa data na njirimara nhazi, yana mmepe na njikwa SQL nime gburugburu mmepe MySQL Workbench, emebere ọkachasị maka ndị...
Nhọrọ CPU na Compute Benchmark dị na Geekbench 4, mmemme ule na-akwado cross-platform nke na-enye ohere iji tụnyere arụmọrụ sistemụ netiti ngwaọrụ. CPU Benchmark na-anwale arụmọrụ nke onye nrụpụta dịka ezigbo ndapụta eji eme ihe, oge nnwale na-ewe netiti nkeji 2 na 20. Na nhọrọ nke ọzọ, a na-emejuputa atumatu kọmpụta nkịtị dịka nhazi onyonyo. Nnwale a na-ewe netiti nkeji 2 na 10. Mgbe emechara ule abụọ a, ibe ahụ ga-emepe na ihe nchọgharị weebụ gị nke ọma wee hụ nsonaazụ ya nụzọ zuru ezu.
Geekbench 4 Ụdịdị
Nha faịlụ: 88.00 MB
Mmepụta: Primate Labs Inc.